Dood-cilmiyeed Lagu Soo Dhawaynayo Rubuc-qarniga Kasoo Wareegtay 20ka Ginboot - Cakaara News
Dood-cilmiyeed Lagu Soo Dhawaynayo Rubuc-qarniga Kasoo Wareegtay 20ka Ginboot
Jigjiga(Cakaaranews)Axad 22ka May 2016. waxaa maanta hoolka shirarka ee Qaryaan Dhoodaan ka dhacay dood-cilmiyeed lagaga hadlayay soo dhawaynta iyo dabaal daga munaasabada rubuc qarniga xuska guusha 20kii ginbood oo 25 jirsatay. Iyadoo Doodcilmiyeekana ay ka soo qaybgaleen maamulada kuliyadaha DDSI ee xarunta deegaanka shaqaalaha iyo Hogaaminta maamulka magaalada jijiga.
Hadaba, shirkan doodcilmiyeedka ah ayaa waxaa hogaaminayay Wasiirka Xafiiska Tababarada, Xirfadaha iyo Farsamada DDSI mudane Naasir Xasan Axmed iyo Wasiir Kuxigeenka Horumarinta Magaalooyinka Dhismaha iyo Warshadaha DDSI mudane Axmed Shurgi. Waxayna masuuliyiintani soo bandhigeen warbixino ku saabsan sooyaalka taariikheed ee guusha 20ka ginbood iyo waliba waxqabadka dawlada ee 25kii sano ee itoobiyada cusub curatay kadib markii kaligiitaliskii dhargiga afka dhulka loodaray. Dhinaca kale shaqaalaha kuliyadaha iyo maamulka magaalada jigjiga ayaa iyaguna dhankooda ka dooday isbadalka balaadhan ee 25ka sano lagaadhay dhinacyada Horumarka, Nabadgalyada iyo maamulka suuban ee guusha rubuc qarnigii 20ka ginbood.
Sikastaba ha ahaatee, munaasabado iyo doodcilmiyeedyo kala duwan ayaa maalmahanba si isdabajooga ah uga socda caasimada DDSI ee magaalada jigjiga iyo waliba degmooyinka iyo maamul magaalooyinka DDSI taasoo lagu soo dhawaynayo xuska sanadguurada 25aad ee 20 ka ginboot oo ay kadhiman tahay oo kaliya maalmoyar.